ASAN’NY APOSTOLY 21.27-40 : SEDRA MAMPANDRESY | Fitandremana Ankadifotsy
ASAN’NY APOSTOLY 21.27-40 : SEDRA MAMPANDRESY
ASAN’NY APOSTOLY 21.27-40
Fanendrikendrehana sy fialonana no nataon’ireto Jiosy avy tany Asia an’i Paoly. Ratsy ny fony ka tsy misaina zava-tsoa. Teraka ny fanenjehana an’i Paoly izay nahataona olona maro ho amin’ny fivavahana marina amin’ny Kristy Jesoa. Jamba ny masom-panahin’ireo mpanenjika azy ka tsy nahafantatra ny tena fahamarinana. Izany no nahatonga azy ireo nampikotaba ny vahoaka rehetra sy nisambotra an’i Paoly raha nahita azy teo an-kianjan’ny tempoly (27-29).
Tanteraka ny faminaniana nambaran’i Agabo ny amin’izay hanjo an’i Paoly ao Jerosalema (10-11). Nofatorana sy nenjehina tokoa izy ary nofofoina ny ainy (30-36; Salamo 2.1-3). Rehefa dinihina izay voalaza eto dia toy ny nanjo an’i Jesoa mihitsy. Tsy maintsy mandalo sedra mafy tokoa mba ho fanefena azy, izay rehetra te-hanara-dia an’i Jesoa (Lioka 14.33; II Timoty 3.12), kanefa tsy mba afoin’Andriamanitra velively (Marka 13.11; Lioka 12.11-12).
Enjehina nefa tsy nafoy (II Korintiana 4.9). Ny miaramila romana indray eto no nanavotra an’i Paoly mba tsy ho fatin’ny olona. Afaka mampiasa ny olona rehetra tokoa Andriamanitra mba hanavotany ny zanany. Ny anjarantsika dia ny matoky Azy hatrany satria efa nambarany fa etỳ amin’izao tontolo izao no hahitantsika fahoriana, nefa matokia fa Izaho efa naharesy izao tontolo izao (Jaona 16.33).
Saino : Na zovy na zovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy (Lioka 14.27).